Akwụkwọ nke Huawei MatePad 10.4 na-ekpughe ụfọdụ atụmatụ ya Gam akporosis
La Huawei MatePad 10.4 ọ bụ Huawei ọzọ smart mbadamba. Amabeghị ya kpọmkwem mgbe ngosi na mwepụta nke usoro a ga-arụ, mana ihe doro anya bụ na ọ ga-eme n'oge na-adịghị anya, ikekwe n'ime ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu ole na ole.
Couplebọchị ole na ole gara aga ihe dị ka sụgharịrị pịa oyiyi nke a ọnụ na Weibo. Otu onye ọrụ China leaked ya na ọtụtụ isi àgwà ya, yabụ na anyị nwere ụfọdụ ihe ọmụma banyere ya, nke bụ mgbakwunye na ndị anyị kọwara n'okpuru ebe a.
Dabere na ọkwa ọhụrụ, Huawei MatePad 10.4 nwere mkpebi 2K na-enweghị atụ ngosi. Aha mbadamba nkume a na-egosi diagonal ya na sentimita asatọ, mana, ọ bụrụhaala na ekwenyeghị ya, enwere ike ịnye ya dịka asịrị.
Na azụ enwere ọkụ ọkụ ọkụ iji mee ka ọnọdụ ọkụ dị ala. Nke a na-esonyere ọnụ ụlọ bụ isi, nke egosiri dị ka a otu 8 megapixel sensor. Ma ọ bụ ezie na ọ naghị ahụ nke ọma na akwụkwọ ngosi ahụ dị n'elu, a na-ekwu na MatePad 10.4 ọhụrụ ahụ nwere ihe ọzọ 8 MP na-aga n'ihu maka selfies, ihu ihu, na ọkpụkpọ vidiyo.
Huawei MatePad gbapụrụ
Dị nnọọ ka GSMArena Na nchịkọta, ngwaọrụ ahụ nwere ọdụ ụgbọ USB-C na ala, na-akwado mkpịsị M-Pen, wee jiri opekata mpe nhọrọ agba abụọ: ọcha na isi awọ. E gosipụtara ojiji nke ikpo okwu mkpanaka Kirin 810, EMUI 10.1 Lite nhazi nhazi site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na batrị ikike 7.250 mAh, nke nwere ike ịbịa na nkwado maka teknụzụ ngwa ngwa.
A kọkwara na ga-enwe LTE na Wi-Fi icheOnye nke mbu gha abia na nhazi 4 + 64GB na 6 + 128GB nhazi ebe nchekwa, ma a gha enye nke ikpeazu na 4 + 64GB na 4 + 128GB.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Akwụkwọ ọkwa nke Huawei MatePad 10.4 gosipụtara ụfọdụ atụmatụ ya
Samsung Cloud kwụsịrị ịmekọrịta data keyboard